Wafdi ka socda Galmudug oo maanta gaaray Caabudwaaq + Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Galmudug oo maanta gaaray Caabudwaaq + Sawirro
Ardaan Yare 29 August 2018 29 August 2018
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo maanta ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya ayaa wax ay gaareen Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Safarka Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa qeyb ka ahaa xubno mas’uuliyiin ah oo ka tirsan Galmudug,waxaana Magaalada Caabuqwaaq ku soo dhaweeyay,mas’uuliyiinta maamulka Degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan halkaasi .
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa waxa uu Degmada Caabuqwaaq kulamo kula qaatay mas’uuliyiinta maamulka Degmada,iyadoo kulankaas loo hadlay arrimo ay kamid ahaayeen amniga iyo waxyaabo kale.
Socdaalka maanta uu ku gaaray Maxamed Xaashi Cabdi Carabey Caabudwaaq ayaa waxa ku soo aadayaa xili labo maalin ka hor Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug uu gaaray Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geele Xaaf,iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhaxeeya Madaxda ugu sareeysa maamulka Galmudug.